【 အနုပညာ 】အလှူလုပျတိုငျး တခွားသူတှလေညျး ကုသိုလျစိတျလေး ပှားမြားစဖေို့ ဆန်ဒရှိနတေယျ ဆိုတဲ့ သရုပျဆောငျ ပှငျ့နဒီမောငျ | Opinion Leaders
အလှူအတနျးလုပျတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီး လူမှုကှနျရကျမှာတငျကာ ပွနျလညျဖျောပွခဲ့တာတှဟော တခွားသူတှေ အနနေဲ့လညျး ကုသိုလျစိတျလေး ပှားမြားစဖေို့အတှကျကွောငျ့လညျး ဖွဈတယျလို့ သရုပျဆောငျ ပှငျ့နဒီမောငျ က ပွောပါတယျ။
“တကယျတော့လေ ကွှားတာမဟုတျပါဘူးနျော၊ အရငျတုနျးကဆိုရငျ ကိုယျလှူခဲ့တဲ့အရာတှကေို တခွားသူတှလေညျး သိစရာမလိုဘူးလို့ ထငျခဲ့တာ၊ ဒါပမေဲ့ သူမြားတှလှေူတာကို ကိုယျကကွညျ့ရငျးနဲ့ စိတျထဲမှာ အရမျးပီတိဖွဈမိတယျ၊ ကိုယျလညျး လှူခငျြစိတျတှဖွေဈမိတယျ၊ ဒါကွောငျ့လညျး အျော . . . ငါလညျးပဲ ဒီလိုမြိုးဖွဈရငျ တခွားသူတှလေညျး ဒီလိုမြိုးပေါ့နျော၊ လှူတာကို ကွညျ့ရငျး ပီတိဖွဈစခေငျြတယျ၊ ပီတိဖွဈပွီး လိုကျလှူကွရငျ ကိုယျလညျးပဲ ကွညျနူးစိတျ ဖွဈမိတယျလေ၊ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး တငျဖွဈတာပါ”လို့ သူမက ရှငျးပွပါတယျ။
သူမဟာ တဈခြိနျက အောငျမွငျကြျောကွားမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈခဲ့သလို ယခငျက ထှကျရှိဖူးတဲ့ Music Video အမြားအပွားမှာ အမွဲတမျးလိုလို သူမ ပါဝငျနတောကို မွငျတှကွေ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကွျောငွာတှေ၊ ပွက်ခဒိနျတှေ၊ ပိုစတာအလှပုံတှကေိုလညျး လကျမလညျအောငျ ရိုကျကူးခဲ့ရပွီး လကျရှိကာလမှာလညျး အထိုကျအလြောကျ ရိုကျကူးနရေသူဖွဈပါတယျ။
“ဘုနျးကွီးတဈပါးဟောဖူးတာရှိတယျ။ ကိုယျလှူတဲ့ အလှူမှာ တဈကပျြပဲ ဖွဈဖွဈ၊ တဈထောငျပဲ ဖွဈဖွဈ နညျးနညျးမြားမြား ကိုယျ့အိမျမှာ ရေးထားပါတဲ့။ အဲ့ဒီလိုအလှူကို ကိုယျကမွငျလိုကျတိုငျး သာဓုချေါခငျြတဲ့ စိတျဖွဈမှာပေါ့နျော၊ ကိုယျလှူထားတာကို တဈခါတလကေရြငျ မနေ့တေတျတာမြိုးတှလေညျးရှိတယျလေ၊ အဲ့ဒီလို ရေးသား ထားတာတှေ၊ မြှဝထေားတာတှကေ ပွနျလညျအမှတျရစပွေီး နောကျထပျနောကျထပျ အလှူတှလေုပျနိုငျဖို့ တှနျးအားတှေ ဖွဈစပေါတယျ၊ သူမြားတှကေိုလညျး ဒီလိုမြိုးကုသိုလျတှရေစခေငျြတယျ၊ အခုကာလမှာတော့ တခွားတော့ ပွောစရာ သိပျမရှိပါဘူး၊ ကနျြးမာအောငျနကွေရငျး ကုသိုလျစိတျလေး ပှားမြားကွပါလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ”လို့ သူမက ဆကျပွောပါတယျ။
သူမဟာ အနုပညာသကျ နှဈပေါငျး ၃၀ လောကျရှိလာခဲ့သလို လကျရှိမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျနရေငျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ကုသိုလျပွုကာ အလှူအတနျးတှကေိုလညျး ဆကျတိုကျလုပျဆောငျနသေူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
အလှူအတန်းလုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ကာ ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ တခြားသူတွေ အနေနဲ့လည်း ကုသိုလ်စိတ်လေး ပွားများစေဖို့အတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ သရုပ်ဆောင် ပွင့်နဒီမောင် က ပြောပါတယ်။
“တကယ်တော့လေ ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်၊ အရင်တုန်းကဆိုရင် ကိုယ်လှူခဲ့တဲ့အရာတွေကို တခြားသူတွေလည်း သိစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမဲ့ သူများတွေလှူတာကို ကိုယ်ကကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းပီတိဖြစ်မိတယ်၊ ကိုယ်လည်း လှူချင်စိတ်တွေဖြစ်မိတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း အော် . . . ငါလည်းပဲ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် တခြားသူတွေလည်း ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်၊ လှူတာကို ကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်စေချင်တယ်၊ ပီတိဖြစ်ပြီး လိုက်လှူကြရင် ကိုယ်လည်းပဲ ကြည်နူးစိတ် ဖြစ်မိတယ်လေ၊ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တင်ဖြစ်တာပါ”လို့ သူမက ရှင်းပြပါတယ်။
သူမဟာ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလို ယခင်က ထွက်ရှိဖူးတဲ့ Music Video အများအပြားမှာ အမြဲတမ်းလိုလို သူမ ပါဝင်နေတာကို မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြော်ငြာတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ၊ ပိုစတာအလှပုံတွေကိုလည်း လက်မလည်အောင် ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး လက်ရှိကာလမှာလည်း အထိုက်အလျောက် ရိုက်ကူးနေရသူဖြစ်ပါတယ်။
“ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟောဖူးတာရှိတယ်။ ကိုယ်လှူတဲ့ အလှူမှာ တစ်ကျပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ထောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းများများ ကိုယ့်အိမ်မှာ ရေးထားပါတဲ့။ အဲ့ဒီလိုအလှူကို ကိုယ်ကမြင်လိုက်တိုင်း သာဓုခေါ်ချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်၊ ကိုယ်လှူထားတာကို တစ်ခါတလေကျရင် မေ့နေတတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လေ၊ အဲ့ဒီလို ရေးသား ထားတာတွေ၊ မျှဝေထားတာတွေက ပြန်လည်အမှတ်ရစေပြီး နောက်ထပ်နောက်ထပ် အလှူတွေလုပ်နိုင်ဖို့ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေပါတယ်၊ သူများတွေကိုလည်း ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်တွေရစေချင်တယ်၊ အခုကာလမှာတော့ တခြားတော့ ပြောစရာ သိပ်မရှိပါဘူး၊ ကျန်းမာအောင်နေကြရင်း ကုသိုလ်စိတ်လေး ပွားများကြပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်”လို့ သူမက ဆက်ပြောပါတယ်။
သူမဟာ အနုပညာသက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ရှိလာခဲ့သလို လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေရင်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကုသိုလ်ပြုကာ အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။